Pyuthan Khabar | लकडाउनको पास आफैले बनाएर सेकुवा खान ३० किलोमिटर पर ! - Pyuthan Khabar लकडाउनको पास आफैले बनाएर सेकुवा खान ३० किलोमिटर पर ! - Pyuthan Khabar
लकडाउनको पास आफैले बनाएर सेकुवा खान ३० किलोमिटर पर !
काठमाण्डौ । देशमा लकडाउनमा छ। सबै सरकार यतिबेला लकडाउन बलियो पार्दै कोरोना संक्रमण रोक्ने प्रयासमा छन्। तर बागमती प्रदेश सरकारका एक जना सचिव भने शनिबार परिवारसहित सरकारी गाडी लिएर काफल खान भन्दै मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्र दामन घुम्न निस्केको भेटिए।